Faah faahin:- Gaari ay la socdeen Arday oo lagu rasaaseeyey Muqdisho – Banaadir weyne
Faah faahin:- Gaari ay la socdeen Arday oo lagu rasaaseeyey Muqdisho
Gaarigaan ayaa xilli uu marayay Bar Koontorool oo lagu hubiya Gaadiidka oo ku taalla degmada Dharkeenleey ee Gobolkan Banaadir, ayaa waxaa la sheegay in uu rasaas ku furay askari ka tirsan Ciidamada Dowladda soomaaliya.
Gaariga ayaa waxaa saarnaa arday dhigata Iskuulka Al-Anwaar (Ex Dhame Yaasiin Carte) ee Magalada Muqdisho, waxaana rasaastaas ku dhaawacmay saddex arday oo walaalo ah, kuwaas oo lagu kala Magacaabo Safiyo Daahir, Zakariye Daahir iyo Hodan Daahir.
Koontoroolka Gaariga ay saarnaayeen ardayda lagu rasaaseeyey ayaa ku yaalla ajabka degmada Dharkenleey ee Gobolkan Banaadir, waxaana la sheegay in askarigii falkaasi geystay uu goobta ka baxsaday.
Saddexda Arday ee Walaalaha ah kuna dhaawacmay rasaasta lagu furay Gaariga ay saarnaayeen ayaa la geeyey dhaawacooda mid ka mid ah Iskuulada ku yaalla Magalada Muqdisho. – Radio Risaala
Wararka ay heleyso Idaacadda Risaala ayaa waxaa ay sheegayaan in Saddexda arday in sanadka dambe ay dhamaynayeen Waxbarashada dugsiga sare ee Al-Anwaar,hayeeshee Maanta degmada dharkenley lagu dhaawacay. – Radio Risaala